आफ्नो लागि, अरुका लागि ~ brazesh
आफ्नो लागि, अरुका लागि
December 18, 2011 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ७३
आजको विश्वमा प्रविधिको विकास पहिले कहिल्यै नसोचेको गतिमा भैरहेको छ । विशेष गरेर सूचना र संचारका सन्दर्भमा भन्ने हो भने त बीस वर्ष अघि गँजडीको गफ जस्तो लाग्ने कुराहरु आज सरल र सहज रुपमा हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छौं । त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनशैली सरल भएको छ, कामकाज सहज भएको छ, हाम्रो समयको वचत भैरहेको छ । त्यो बचेको समयलाई हामीले अरु बढी उत्पादक कामहरुमा खर्चन पाइरहेका छौं । पहिले दशवटा विभिन्न कुराहरुले गर्ने काम आजकल एउटा हातेफोनले नै गर्न सकिन्छ । यो निश्चय नै पनि हाम्रा लागि सुखद परिवर्तन हो । तर प्रविधिको विकास संगसंगै हाम्रो आफ्नो नैतिकताको विकास पनि हुनु त्यति नै जरुरी छ । हाम्रो चेतनाको, हाम्रो ज्ञानको, हाम्रो वोधको विकास के प्रविधि संगसंगै भैरहेको छ त ? आजको विकासको गतिसंग हामीले आफूलाई नकुदाइ सुख्खै छैन, यसमा कुनै विवाद गर्ने ठाउँ छैन । प्रश्न यति मात्र हो, हामीले यो दौड भ्याइरहेका छौं कि छैनौं त ? आज कुनै प्रविधि हामीले राम्ररी प्रयोग गर्दा नगर्दै त्यसको परिस्कृत संस्करण बजारमा आइसकेको हुन्छ । हामी त्यो परिस्कृत संस्करणलाई भेट्न कुदिहाल्छौं । त्यसो गर्न सकेन भने हामी पछाडि पर्छौं । अनि त्यसलाई भेट्टाउँदा नभेट्टाउँदै अर्को संस्करण हाम्रो अघि परिसकेको हुन्छ । हामी आजकल यस्तो घोडा भएका छौं, जसको पीठमा प्रविधि सवार छ । उसले एउटा लामो लठ्ठीमा धागोले बाँधेर एउटा गाजर हाम्रो अघि झुण्ड्याइदिएको छ । हामी त्यो गाजर खानका लागि कुदिरहेका छौं । हामी जति कुद्छौं, गाजर त्यति नै हाम्रो पहुँचभन्दा अलिकति अगाडि नै रहिरहेको हुन्छ । प्रविधिलाई आफ्नो दास बनाउने दिग्भ्रममा चिप्ल्यो भने मानिस कुन बेला आफू त्यसको दास बन्यो, थाहा पनि हुँदैन ।
एउटा सानो उदाहरण यहाँ नेर उल्लेख्य हुन सक्छ । टाइपराइटर भन्ने कुराबाट इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर हुँदै कम्प्यूटरको विकासमा पुग्नलाई निकै लामो समय लागेको थियो । इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर चलाउन पाउने हुने बेलासम्म मानिस टाइपराइटर भन्ने यन्त्रसंग राम्ररी भिज्न भ्याइसकेको थियो । टाइपराइटर आफैमा त्यति धेरै जटिल पनि थिएन । तर आजकल प्रविधिले हजारौं गुना छिटो फड्का मारिरहेको हुन्छ । ती यन्त्रहरु, कम्प्यूटर र मोवाइल फोनहरु यति धेरै परिष्कृत छन्, तिनका कार्यक्षमता यति धेरै विस्तृत छन्, तिनका प्राविधिक संरचना यति धेरै जटिल छन्, ती सबै बुझ्न हामी सक्दैनौं । तर पनि राम्ररी तिनलार्ई चिन्नु अघि नै त्यसको अझ जटिल र परिमार्जित रुप तिर हामी झुम्मिनु परिरहेको छ । त्यसको अर्थ के हो भने, हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधि र हामी बीचको दूरी र असमझदारी दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यसको कुनै नकारात्मक परिणाम नआओस् भन्ने कुरामा आजका मानिसहरु सचेत हुनु जरुरी छ । यो विस्तृत विषयको सबै हाँगाबिंगा केलाउन थाल्यो भने त सानो तिनो महाभारत नै लेद्यन सकिएला । त्यसैले यहाँ नेर अहिले एउटा पक्षको मात्र कुरा गरौं । कुनै पनि मानिस वा कुराको सूचना र जानकारी आजकल अति सरल रुपमा उपलव्ध हुनसक्छ । यसले गर्दा मानिस मानिस वीचको सम्पर्क सहज भएको त अवश्य नै छ तर उसको गोपनीयता पनि त्यति नै खतरामा परिरहेको छ । प्रविधिको विकासले गर्दा कुनै पनि कुराको दुरुपयोग पनि त्यति नै सहज हुँदै गइरहेको छ । यो निश्चय नै पनि द्रूत विकासको लागि हामीले चुकाउनु परेको मूल्य हो ।
सामाजिक संजाल मार्फत आज मानिस एकआर्कालाई नभेटी पनि एकआर्काको निकट हुन पाइरहेको छ । आफ्नो बारे बताइरहन पाएको छ, अरुका बारे थाहा पाइरहेको छ । त्यसको संगसंगै एकआर्कालाई त्यति नै सजिलोसंग विगार गर्न पनि सकिरहेको छ । त्यसले गर्दा आजको मान्छे एकआर्का संग सशंकित पनि त्यही मात्रामा हुन थालिरहेको छ । के प्रविधिले मानिस मानिस बीचको समन्वय र विश्वासको वातावरणलाई भाँडिरहेको त हैन ? बाबुआमालाई आफ्ना केटाकेटीहरुको बारे पहिलेको भन्दा बढी चिन्ता लागिरहेको हुन्छ । प्रेममा चोट खाएको वा असफल प्रेमीले कुनै युवतीका फोटा र विवरणहरुलाई गलत हिसाबले प्रयोग गरिरहेका घटनाहरुका प्रशस्त उदाहरणहरु देखिन थालेका छन् । कसैको कुनै पनि विवरण प्राप्त गर्नु र त्यसलाई निमेष भरमा नै संसारको माझ पु¥याउनु आज सजिलो बनाइदिएको छ प्रविधिको विकासले । यो निश्चय नै पनि सतर्क हुनुपर्ने कुरा हो । तर त्यसो भनेर प्रविधि र विकासलाई पच्छ्याउन छोड्नु यसको समाधान त पक्कै पनि हुन सक्दैन ।
तसर्थ आजको अवस्थामा सबै भन्दा ठूलो आवश्यकता हो, हामी आफैले आफ्ना लागि आचारसंहिताहरु तोक्नु र तिनको अनुशासित रुपमा पालना गर्नु ।
हो, मान्छेको स्वभावले नै गर्दा गर्न हुँदैन भनेको कामले उसलाई बढी आकर्षित गर्छ । आवेगमा आएको बेला अगाडि पछाडि नसोची बदलाको भावनाले अभिप्रेरित हुनु भनेको मान्छेको स्वभावीय कमजोरी हो । यहाँ नेर कसैले पनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, छिमेकको गोठमा छिरेको बाघ भोलि आफ्नो घरमा पनि पल्किन सक्छ । त्यसैले आफू भित्र त्यस्ता बाघहरु जन्मिन वा हुर्कन दिनु हुँदैन । आफ्नो केही क्षणको रोमाञ्चक आवेगले अरुको पूरै जीवनलाई कतिसम्म हानि गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्छ । अरुलाई आफूले दिएको परपीडा भोलि आफैलाई कसैले दिएको अवस्थामा आफूलाई के हुन्छ भन्ने कुरा मानिसले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन । नियम कानून भनेको समय सापेक्ष रुपमा बनिरहेका कुरा हुन्, बनिरहन्छन् तर त्यसको डरले मात्र मान्छे नियन्त्रणमा हुने हो भने संसारमा दुराचार र अपराध उहिल्यै निमिट्यान्न भैसक्नु पर्ने हो । तर त्यसो भएको त छैन । मानिसले डर र करले हैन, स्वेच्छाले कुकर्मबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ । आफूले आफूलाई अनुशासनमा राख्ने हो र कुनै पनि दुराचारबाट टाढा राख्ने हो भने कुनै नियम कानून र तिनका डरको आवश्यकता नै रहँदैन । यो कुरा अरु हरेक क्षेत्रमा जस्तै सूचना र प्रविधिमा पनि लागू हुन्छ । हामीले अरुका लागि यो संसारलाई सुन्दर बनाउने हो भने त्यो हाम्रो आफ्नै लागि पनि त्यति नै सुन्दर हुन्छ ।